Maqaallada Mohsin Ali on Martech Zone |
Maqaallada by Mohsin Ali
Mohsin waa lataliye iyo macalin qalbiga. Waxa uu ku jiray warshadaha muddo toban sano ah, isaga oo ka caawinaya dadka inay ku gaaraan ujeedooyinkooda suuqgeynta dhijitaalka ah. Ma aha oo kaliya in la helo taraafig badan ama si ka wanaagsan loo beddelo - waxay ku saabsan tahay inaad hubiso inaad awood u leedahay inaad fariintaada u gudbiso si wax ku ool ah si ay dhagaystayaashaadu u fahmaan waxaad u baahan tahay inay sameeyaan!
5 tillaabooyinka lagu Abuurayo Istaraatiijiyada Suuqgeynta Macluumaadka Guusha
Arbacada, February 2, 2022 Arbacada, February 2, 2022 Mohsin Ali
Suuqgeynta nuxurku waa habka ugu dhaqsaha badan ugu koraya uguna waxtarka badan ee lagu suuq gayn karo ganacsigaaga, laakiin abuurista istaraatiijiyad guulaysata ayaa noqon karta mid adag. Inta badan suuqgeyneyaasha nuxurka ayaa la halgamaya istiraatiijiyadooda sababtoo ah ma haystaan ​​hab cad oo ay ku abuuraan. Waxay wakhti ku luminayaan xeeladaha aan shaqaynayn halkii ay diiradda saari lahaayeen xeeladaha wax qabad leh. Hagahan wuxuu qeexayaa 5 tillaabo oo aad u baahan tahay si aad u abuurto istaraatiijiyad suuqgeyneed oo guul leh si aad u kobciso ganacsigaaga